मतगणना अपडेट: कांग्रेस र एमालेबीच कडा टक्कर
काठमाण्डौ । बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनासँगै प्रारम्भिक मतपरिणामहरु आउन थालेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा एमाले र कांग्रेसबीच टक्कर देखिएको छ । एमाले र कांग्रेसले केही स्थानबाट विजयी सुरुवात गरिसकेका छन् । कतिपय स्थानमा रोचक भिडन्त देखिएको छ । मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड...
बैशाख ३० को चुनाव सर्नसक्ने, यी कारणले बढ्यो सशंय
काठमाण्डौ । बैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च हुन थालेका संकेतहरु बाहिरिन थालेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी दलका प्रमुखहरु नै स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्नुपर्ने पक्षमा लागेपछि यसले अवस्था थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु भित्रभित्रै निर्वाचनको मिति सार्ने...
एमालेको निरन्तर विरोधबीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन
काठमाण्डौ । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीचको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । सो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यहरु रहेपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले एमसीसी सम्झौता संसदबाट...
एमसीसीमा सहमति भएन, गठबन्धन बैठक फेरि निश्कर्षहीन
काठमाण्डौ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको विषयमा समान धारणा बनाउन भन्दै बसेको ५ दलीय गठबन्धनको बैठक आज पनि बिना निश्कर्ष सकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी जसरी पनि संसदमा टेबल गर्ने अडान राखेपछि बैठक एकघण्टा पनि नबसी सकिएको हो । बैठकमा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले...
सत्ता गठबन्धनको बैठक सकियो, एमसीसीको बिषयमा अनिर्णित
काठमाण्डौ । निकै चासोको साथ हेरिएको सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनको बैठक बिना निश्कर्ष सकिएको छ । साँझ ५ बजे बालुवाटारमा सुरु भएको बैठक २ घण्टा चले पनि एमसीसीको विषयमा ठोस निर्णय गर्न सकेन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार २ घण्टासम्म एमसीसीको विषयमा समान धारणा बनाएर अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भए पनि कांग्रेस र माओवादीका फरक फरक धारणाले...
प्रचण्डले निहुँ खोजेपछि कांग्रेसले थाल्यो एमालेसँग संवाद, ओलीले पठाए प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने सन्देश
काठमाण्डौ । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) संसदबाट पास गर्ने विषयले गठबन्धन सरकार समस्यामा परेको छ । गठबन्धनमै रहेको एउटा दल माओवादी केन्द्रले एमसीसी कुनै पनि हालतमा संसदमा टेबल गर्न नदिने अडान नछाडेपछि कांग्रेसका नेताहरुले एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विकल्पमा छलफल अगाडि बढाएका छन् । एमालेका एक...
माओवादीले आजै सरकार छाड्नसक्ने, लगानीकर्ताको मनोबलमा कस्तो परिवर्तन आउला ?
काठमाण्डौ । संभवत पेचिलो बन्दै गएको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो परिवर्तन भएन भने माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्नेछ । आज साँझ बस्ने सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि गठबन्धन टुटेको घोषणा हुनसक्नेछ र योसँगै सत्ता समीकरणमा समेत नयाँ परिदृश्य देखिन सक्नेछ । राजनीति र सत्ता सहकार्यले नयाँ बाटो समात्यो भने सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुको नजरमा...
जेठ मसान्तभित्रै स्थानीय निर्वाचन हुने, के अब सेयर बजार बुम हुन्छ ?
काठमाण्डौ । अन्ततः आगामी जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको शनिवार दोश्रोपटक बसेको बैठकले आगामी जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको हो । गठबन्धनले बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत...